'सत्य, सेवा, सुरक्षणम्' माथिको प्रश्न | Austro Nepal
कोष- रमेश स्मृति कोष
Female By Hemanta Giri
यौन हिसांको आरोप लागेका रामबहादुर बमजन माथि प्रहरीले छानबिन गर्ने,
नू’सँग एक साँझ
प्रदेश सरकारले आफ्नो बाटो समाईसक्यो : मख्यमन्त्री पौडेल
कोरियामा नेपाली विद्यार्थीबाट आत्महत्याको प्रयास
के तपाईंलाई थाहा छ, तपाईंको खल्तीमा सुनको खानी छ ?
यसकारण ‘पेचिलो’ बन्दैछ नेकपाकोे स्थायी कमिटी बैठक
AustroNepal - First Nepali Online News From Australia
vacancy in job
‘सत्य, सेवा, सुरक्षणम्’ माथिको प्रश्न
By austro	 Last updated Dec 1, 2018
ज्यानै जाने विभिन्न घटना सार्वजनिक भइरहँदा सरकार भने राजनीतिक आवरण दिइएको भन्दै पन्छिन्छ । यता नागरिक आजित छन् । गृहमन्त्री स्वयम्ले पुँजीवादका कारण मुलुकमा शृङ्खलाबद्ध बलात्कार र हत्याका बढेको बताउँछन् । समस्याको पहिचान र त्यसको सामाधान कसरी गर्ने भन्नेतिर सरकारको ध्यानाकर्षण भएको देखिँदैन । राजनीतिक रूपमा मात्र पाइला चाल्छन् । यसखाले कृयाकलापले अपराधीको मनोबल बढाउँछ । वैधानिक र अवैधानिक रूपमा आपराधिक क्रियाकलाप झन् बढेर गएको छ ।
कतिपय घटनामा प्रहरी प्रशासनकै कमजोरी देखिन्छ । यस्ता आपराधिक छविका व्यक्तिहरूको संरक्षणले लोकतन्त्र खतरामा परिरहेको छ । यसमा राज्यकै जिम्मेवार निकायको पनि कमजोरी छ । तलब, भता पकाउने र सम्पत्ति कमाउनेतिर मात्र सबैको सक्रिय देखिन्छन् । पीडित नागरिक झन् पीडित हुँदै गएका छन् । आत्महत्या गर्नेसम्म वातावरणको सिर्जना हुने गरेको छ । यसमा नागरिक कति दोषी छन् । राज्यका सम्बन्धित निकायका कति कमजोरी छन्, सबैले बुझ्न जरूरी छ । यसको सामाधान पनि जरूरी छ । घटना एक थरी प्रचारवादी अर्को ढङ्गले हुने प्रवृत्ति डरलाग्दो छ । यसबाट असल र कमजोर नागरिकहरू अन्यायको सास्ती बेहोर्नु परिरहेको छ । यी घटनाहरू उदाहरण मात्र हुन् । समाजमा यस्ता थुप्रै घटनाहरू दबिएका छन् । यसमा पीडितको कमजोरी नभएर समाजिक राजनीतिक कारण, अभिभावक र राज्यको जिम्मेवार निकायहरूकै कमजोरी छन् ।
कतिपय घट्नाहरू विगत झल्किनेगरी प्रहरी प्रशासनबाटै घटिरहेका छन् । लोकतन्त्रमा अझै पनि लोकतान्त्रिक खिल्ली उडाउँदै प्रहरी हिरासतमै चरम यातना दिने र घटना जबर्जस्ती कबुल गर्न लगाउने प्रवृत्ति कायमै छ । प्रहरीले यसलाई आफ्नो धर्म मान्छन् । धेरैजसो घटना यथार्थभन्दा पर रहेर यातनाकै बलमा कबुल गराउने र मुचुल्का गर्ने र मुद्दा चलाउने प्रवृत्ति प्रहरीभित्र छ । यो प्रवृत्तिले पीडितले न्याय पाउनै गाह्रो छ । त्यसैले जनतामा प्रहरी प्रशासनप्रति नाकारात्मक प्रभाव धेरै छन् । जेलनेलमा पीडकभन्दा पीडित वर्ग नै जाकिएको छ । प्रहरीलाई बन्दुकको भरमा कानुन चलाउन दिनु राज्यको गम्भीर कानुनी कमजोरी हो । यो क्रम विगतदेखि नै चल्दै आएको छ । यसलाई भत्काउनुपर्छ ।
प्रहरी सङ्गठनलाई कानुन हातमा थमाउनुभन्दा उनीहरूलाई कानुनभित्र राख्न जरूरी छ । यसबाट थुप्रै घटना रोकिन्छन् । प्रहरीलाई समाजको निर्देशनमा संरक्षकको रूपमा राख्नुपर्छ । थुप्रै लोकतान्त्रिक मुलुकमा यस्तो व्यवस्था छ । जहाँ प्रहरी प्रशासन स्थानीय समस्या र जनताको आधारमा परिचालित हुन्छन् । समस्याको निराकरण गर्छन् । तर पीडकलाई भन्दा पीडितलाई नै यातना दिएर नागरिक त्रसित पार्नेगरी हुने अनुसन्धान, धरपकड र यातना सर्वदा निन्दनीय छ । प्रहरी सङ्गठन यहाँ सच्चिनुपर्छ । सच्चिएन भन्ने समाजमा यहाँबाटै द्वन्द्वको सुरुवात हुन्छ । जब समाजमा द्वन्द्वको सुरूवात हुन्छ तब स्वतः त्यसले राष्ट्रिय रूप लिन्छ ।
बाहिरी विशेष घुम्ती प्रहरी छुट्टै परिचालित छ । तर पनि त्यसलाई चुनौती दिनेगरी जनपथ, सशस्त्र र सेनाले पनि सिभिलमा छोटा हतियारसहित खुलेआम घुम्ती प्रहरी परिचालन गर्छन् । यो केको सङ्केत हो ? सरकार र कानुन भन्दा फरक ढङ्गले मनोमानी किन यिनीहरू परिचालित हुन्छन् ? कसका लागि र केका लागि परिचालित हुन्छन् ? खोजीनिति गर्न जरूरी छ । प्रहरीलाई राज्यको नियन्त्रणभन्दा बाहिर जस्तो देख्निछ । यसलाई नियन्त्रण र हस्तक्षेप बढाउन जरूरी छ ।
यसर्थ मुलुकका यस्ता थुप्रै घटनाहरू छन्, जुन प्रहरीबाटै प्रभावित छन् । अधिकांश घटनामा कुनै न कुनै रूपमा प्रहरी संलग्नता रहँदै आएको छ । अनाहकमा निर्दोष मान्छे फसाउने, अपराध कबुल गराउने र अफ्नो मातहतको निकायलाई सत्य घटनाबाट बेखबर बनाउने र आफू चोखिने कृयाकलाप पछिल्ला घटनाले देखाएको छ । यसबाट के प्रमाणित हुन्छ, मुलुकमा लोकतन्त्र आएको हो कि लुटतन्त्र ? यहाँ दलाली तन्त्रको सरकारी ब्युरोक्रेसी छ ? यसबाट अहिले प्रहरीको ‘सत्य सेवा सुरक्षणम्’माथि प्रश्न खडा भएको छ । राज्यले यसलाई बेलैमा सच्याउनुपर्छ । राज्यको कानुन बन्दुकधारीको हातबाट न्यायालयको हातमा थमाउनुपर्छ । त्यसले मात्र बलात्कारलगायतका सामाजिक अपराधका घटनालाई निस्तेज पार्न सक्छ । प्रहरी संलग्नताको गन्ध आउँदैन । आए पनि त्यो फरक रूपमा आउँछ र त्यसको सामाधान पनि सही रूपमा गर्न सकिन्छ । अहिलेको जस्तो अपराधी पत्ता लगाउन भद्रगोल अवस्थाको सिर्जना हुदैन ।
गुलाबी हीराको मूल्य ५० मिलियन डलर !
Kitchen hand & Dishwasher staff wanted Indian restaurant
austro	 Dec 2, 2018 0
Chef and all-rounder inacafe
Casual cleaner need Immediately start
रोग पत्ता लगाउने शौचालय
काठमाडौँ — बाथरुमलाई गोपनीयताको अन्तिम आधार मानिन्छ । तर, अब चाडै एउटा नयाँ ल्याभोटरी(प्रविधियुक्त शौचालय) ले…
बंगलादेशमा कालो सूचीका मेडिकल कलेजमा नेपाली विद्यार्थी
के ग्रीन टि पिउनु खतरनाक पनि हुनसक्छ ?
दाँत दुखेर हैरान हुनुहुन्छ ? अपनाउनुस् यस्तो घरेलु उपचारहरु
Rup Rasaili	 Feb 24, 2019 0
कोष- रमेश स्मृति कोषसम्मान - र साहित्यकार "रमेश हरिलट्ठक"को स्मृतिमा गठित "रमेश स्मृति कोष"ले हरेक वर्ष वितरण…
© 2019 - Austro Nepal. All Rights Reserved.